LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TAO AMBONDROMAMY : Fiara iray nivadibadika, mpandeha miisa 36 naratra mafy
Lozam-piarakodia nahatsiravina no nitranga tao Ambondromamy lalam-pirenena fahaenina iny, omaly alahady maraina, tokony ho tamin’ny iray ora tany ho any. 13 mai 2019
Fiarabe mpitatitra mampitohy an’Antananarivo sy Sambava no tra-doza tamin’io fotoana io. Araka ny tatitra avy tamin’ireo nahita maso ny zava-niseho tany an-toerana dia noho ny fandehanana mafy loatra, niampy fialana lavaka no nampivadibadika ny fiara. Vokany, potika tanteraka tsy nisy noraisina intsony io fiara io ary nahatratra 36 eo ho eo ireo naratra mafy.
Mpandeha miisa 50 izy ireo no tao anaty fiara. Voalaza fa avy aty an-drenivohitra hihazo an’i Sambava ny anton-dia ary tany amin’ny 2 km avaratry ny tanànan’Ambondromamy no niharam-boina izy ireo. Raha ny tatitra voarainay farany, omaly tolakandro teo am-panoratana ny lahatsoratra dia tsy nisy ny aina nafoy. Ireo naratra mafy kosa nalefa avy hatrany notsaboina any Mahajanga rehefa hita fa tsy vita tao amin’ny Hopitalin’ Ambondromamy ny fikarakarana azy ireo.
Tsy mitsahatra manao fanentanana ireo mpampiasa lalana hatrany ny eo anivon’ny mpitandro filaminana misahana ny fifamoivoizana ny amin’ny tokony hitandremana, indrindra fa ny fanajana ny hafainganam-pandeha. Matetika dia saika ny fandehanana mafy loatra no mitera-doza. Raha tsiahivina izao ny zava-niseho ny faran’ny herinandro lasa teo iny dia olona miisa efatra no namoy ny ainy, 38 naratra mafy noho ny lozam-piarakodia tany amin’ny lalam-pirenena faha-35 iny. Fandehanana mafy avokoa no antony nahatonga izany raha ny angom-baovao ka mila mitandrina ny rehetra mba hisorohana ny loza.
LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TAO AMBONDROMAMY
2019-05-14 18:07:51 par Joess wensd
Ary inona ny soso-kevitra fanjakana amin’izany ?
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (132) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (92) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (87) 22 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (79) 26 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (78) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (68) 22 mai 2020